10 Zaridaina tsara tarehy indrindra any Eropa | Save A Train
Home > Travel Europe > 10 Zaridaina tsara tarehy indrindra any Eropa
Fotoana famakiana: 6 minitra(Last Nohavaozina: 13/11/2020)
Eoropa no tsara indrindra amin'ny lohataona. Ny havoana sy ny arabe dia mamony amin'ny loko manaitra, manova ny zoro rehetra ho lasa sary hosodoko mahafinaritra. Avy amin'ny zaridaina frantsay ka hatramin'ny zaridaina anglisy ala sy zaridaina villa italiana, betsaka kokoa ny zaridaina any Eropa noho ny any amin'ny faritra hafa rehetra eto an-tany. Raha mikasa lohataona ianao na fialantsasatra fahavaratra any Eropa dia tokony hitsidika ny iray amin'ireny ianao 10 zaridaina tsara tarehy indrindra any Eropa.
1. Versailles, Frantsa
Loharano, tany maitso mando, ataovy ambony ny zaridainan'i Versailles 10 zaridaina tsara tarehy indrindra any Eropa.
800 tany hektara no mandrafitra ny zaridainan'i Versailles. Ireo lalana mihodina, 35 lakandrano sy sarivongan-drano km, manaitaitra ireo mpandeha eran'izao tontolo izao. Azo antoka fa, Versailles dia tsara fitsangatsanganana andro avy any Paris, ary raha vao tonga ianao dia hoentin'ny hatsaran-tarehiny.
Ahoana ny fomba ahatongavana any amin'ny zaridaina Versailles?
Ny zaridaina dia ao amin'ny tanànan'i Versailles, adiny iray eo ho eo avy eo amin'ny lamasinina avy any Paris.
Mihoatra ny 7 tulips holandey an-tapitrisany mandray tsara ny mpitsidika isaky ny lohataona ao amin'ny Keukenhof Gardens mahafinaritra. Ny zaridaina voninkazo lehibe indrindra eto an-tany dia manokatra ny vavahady amin'ny volana aprily sy mey. Ny tulip’ Bloom dia iray amin'ireo hetsika lehibe indrindra eto Netherlands.
Aiza ny zaridainan'i Keukenhof?
Ny zaridaina dia any Lisse, ao am-pon'ny Bollenstreek. Antsasak'adiny fotsiny amin'ny lamasinina avy any Amsterdam.
3. Villa D'este Gardens, Roma Italia
Ohatra manaitra ny Renaissance any Italia, Mahasarika ny zaridaina Ville d'Este ao Tivoli. Ity zaridaina mahafinaritra ity dia iray amin'ireo UNESCO toerana lova manerantany any Eropa.
Sokafy mandritra ny taona, ny zaridainan'i 1000 marina ny loharano 30 km avy any Roma. Ny iray amin'ireo endrika manaitra izay ho hitanao momba azy dia ny endrika zaridaina miorina amin'ny terraced, sy loharano misy rano miaraka amin'ny mozika hydraulic.
Ahoana ny fomba hahatratrarana ny zaridaina Villa D'este ao Tivoli?
Tivoli mora azo amin'ny lamasinina avy any Roma ary avy eo ny bus fitateram-bahoaka avy eo amin'ny gara.
Ny zaridaina Isola Bella dia eo afovoan'ny Farihy Maggiore. Ny Nosy Borromean any avaratr'i Italia, dia ohatra tsara amin'ny lapan'ny fomba Baroque sy ny zaridaina Italiana.
Misaotra ny toetr'andro malefaka ao amin'ny Helodrano Borromean, hahita voninkazo tsy fahita firy sy hafakely any amin'ny zaridainan'i Isola Bella ianao. Ankoatry ny, dobo, loharano, ary na ny vorombola fotsy aza dia hamita ny toerana mahavariana ho an'ny sary fitetezam-paritany.
Ahoana ny fomba hahatratrarana zaridaina Isola Bella avy any Milan?
Ny zaridaina Isola Bella dia a fitsangatsanganana an-tany mahafinaritra avy any Milan. Afaka mivezivezy avy eo afovoan'ny Milan ianao ao anatin'ny adiny iray amin'ny lamasinina sy a mitaingina lakana avy any Stresa.
Petrin Hill dia fialantsasatra mahafinaritra avy amin'ireo mpizahatany maro. Maitso maitso, hazo, ary ny lalana miolakolaka dia mitondra anao any amin'ny fomba mahavariana an'ny tetezana sy ny tranoben'i Prague. Ho an'ny fahitana tanàna tsy hay hadinoina, tokony mankany amin'ny tilikambo Petrin Hill ianao izay miorina amin'ireo lalana ao anaty zaridaina.
Ny zaridaina Petrin Hill dia iray amin'ireo zaridaina tsara indrindra any Eropa. Afaka mandany tolakandro miala sasatra na maraina kamo ianao mankafy ny fomba fijery.
Ahoana ny fomba ahatongavana any amin'ny Garden Garden Hill?
Any afovoan'i Prague, azonao atao ny mandeha an-tongotra na mitaingina metro mankany amin'ny zaridaina amin'ny lafiny rehetra amin'ny tanàna.
6. Zaridaina Marqueyssac, Frantsa
Ny zaridaina tsy manam-paharoa any Eropa dia ireo zaridaina mampiato an'i Marqueyssac any Frantsa. Ny fampiatoana ny lohasaha Dordogne no sangan'asa tsy iza fa i Andre le Notre, planner ny zaridaina Versailles.
Ny mampiavaka ny zaridaina dia mitoetra amin'ny zavakanto topiary an'ny 150,000 Kitapo vita amin'ny tanana vita amin'ny tànana miorina amin'ny tambajotran'ny lalana toa ny zavona. The gardens surround 17th-century chateaux and overlook the Dordogne valley. Ho fitsidihana mahagaga tokoa, amboary ny dianao ny alakamisy hariva, rehefa mandrehitra labozia ny zaridaina.
Ahoana no fomba ahatongavana any amin'ny zaridainan'i Marqueyssac?
Eo anelanelan'ny divay faritra any Frantsa. Ny zaridaina Marqueyssac dia a 2 ora ' mitaingina fiaran-dalamby avy any Bordeaux.
La Rochelle mankany Nantes Train Prices
Toulouse mankany La Rochelle Train Prices
Bordeaux mankany La Rochelle Train Prices
Vidin'ny lamasinina any Paris hatrany La Rochelle
7. Ludwigsburg Palace, Alemaina
Fantatra amin'ny anarana hoe Bluhenden Barock amin'ny alemà, midika hoe Baroque mamony, Ludwigsburg Palace Garden dia tsara tarehy. Mitovy amin'ny zaridaina Versailles mandravaka ny tanin'ny lapa, ity zaridaina alemanina ity dia mamony isaky ny lohataona amin'ny raozy, zavamaniry maitso, and even a Japanese inspired garden with Bonsai trees.
Ny zaridaina Baroque symmetrika dia namboarina tamin'ny fomba frantsay mba hamenoana ny lapa.
Ahoana ny fomba ahatongavana any amin'ny zaridainan'i Ludwigsburg?
Any ivelan'ny Stuttgart no misy ilay zaridaina, ary izany dia a 30 mitaingina minitra fitateram-bahoaka.
8. Zaridaina Mainau Island, Alemaina
Ny hatsarana ao amin'ny nosy voninkazo Mainau dia ny hoe misy foana mamelana. Ity zaridaina mahatalanjona ity dia miorina ao amin'ny Farihin'i Constance. Ny toetr'andro semi-tropical dia mety amin'ny voninkazo tropikaly sy zaridaina raozy anglisy.
Ny zaridaina dia noforonina tao amin'ny 19faha taonjato iray nataon'ny printsy Nikolaus von Esterhazy. Androany ity 45 Ny zaridaina hektara dia mandray mpitsidika an-tapitrisany mandavantaona mandritra ny fampisehoana orkide izay manokatra ny vanim-potoanan'ny lohataona.
Ahoana ny fomba ahatongavana any amin'ny Mainau Garden?
Azonao atao ny mivezivezy amin'ny bus avy eo amin'ny gara gara Konstanz, ferry fiara avy amin'ny tanàna manodidina, na amin'ny fiara.
9. Zaridaina Sigurta Verona, Italia
Park Zaridaina Sigurta dia paradisa italiana. Ity zaridaina mahatalanjona ity dia noforonina voalohany ho zaridaina kely manodidina ny villa tantsaha. With time it expanded to the vast garden it is today. Giardino Sigurta garden is a sanctuary to 1,500 hazo, ary voninkazo iray tapitrisa an'ny 300 karazana isan-karazany izay mamony isaky ny lohataona. Amin'ny fahavaratra dia 18 ireo farihy sy farihy zaridaina dia lasa fitoerana masina ho an'ny mponina sy mpandeha eran'izao tontolo izao.
Ahoana no fomba hahatongavana any Parco Giardino Sigurta?
Zaridaina Giardino Sigurta dia 8 km atsimon'ny Farihy Garda ary 25 km avy eo Mantua. Afaka mandeha lamasinina avy any Verona ianao, ary avy eo makà ny bus mankany Valeggio Sul Mincio.
Vidin'ny lamasinina Rimini mankany Verona
Roma hatramin'ny vidiny Verona
Vidiny Florence hatramin'ny Verona
Venice mankany Verona Train Prices
10. Zaridaina Hallerbos Brussels, Belzika
Indray mandeha isan-taona, Alan'i Hallerbos any Halle, mamony ho zaridaina toy ny angano. Misaotra an'ireo bluebells mahafinaritra, nanomboka ny faran'ny volana aprily ka hatramin'ny tapaky ny volana Mey dia niova ho fanjakana manga ny tany maintso.
Ary, Zaridainan'i Hallerbos no misy ny serfa sy bitro. Tao anatin'ny adiny iray mitaingina lamasinina avy eto an-drenivohitra, azonao atao ny miditra amin'ny lalana miolakolaka tsara any anaty ala manga. Noho izany, raha mikasa ny hitsidika an'i Belzika amin'ny lohataona ianao, tsarovy ny mijanona amin'ny iray amin'ireo tsara tarehy ala any Eropa ary raiso ny diany mandehandeha mandalo amin'ilay lalana mavo.
Luksemburg mankany Bruxelles Train Prix
Antwerpen mankany Bruxelles vidin'ny fiaran-dalamby
Vidin'ny lamasinina mankany Amsterdam mankany Bruxelles
Vidin'ny lamasinina any Paris mankany Bruxelles
eto amin'ny Save A Train, Ho faly izahay manampy anao handamina ny fialan-tsasatrao ho an'ny 10 zaridaina tsara tarehy indrindra any Eropa amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “10 Gardens tsara tarehy indrindra any Eropa” ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-gardens-europe/- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Raha te-ho tsara fanahy ny mpampiasa, dia afaka hitarika azy ireo mivantana an-pikarohana pejy. Eo ity rohy ity, ho hitanao ny zotram-piaranay malaza indrindra - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, ary afaka hanova ny / de ho / tr na / fiteny azy sy ny maro hafa.
#fahavaratra beautifulgardens europegardens EuropeTraveling Frenchgarden lohataona travelbytrain